Vaovao - Famaritana raha toa ny fonosana fitaterana azo ampiasaina indray no mety amin'ny orinasanao BY RICK LEBLANC
Ity no lahatsoratra fahatelo sy farany amin'ny andiany telo. Ny lahatsoratra voalohany dia namaritra ny fonosana fitaterana azo ampiasaina indray ary ny anjara toerany amin'ny rojom-panolorana, ny lahatsoratra faharoa dia nanisy antsipiriany ny tombony ara-toekarena sy ny tontolo iainana amin'ny fonosana fitaterana azo ampiasaina indray, ary ity lahatsoratra farany ity dia manome masontsivana sy fitaovana sasany hanampiana ireo mpamaky hamantatra raha mahasoa ny fanovana rehetra sa ny sasany amin'ireo fonosana fitaterana indray mandeha na voafetra ampiasain'ny orinasa mankany amin'ny rafitra famonosana fitaterana azo ampiasaina indray.
Rehefa mandinika ny fampiharana ny rafitra famonosana fitaterana azo ampiasaina indray dia tsy maintsy jeren'ny fikambanana amin'ny fomba feno ny vola lany amin'ny rafitra toekarena sy tontolo iainana mba handrefesana ny fiantraikany amin'ny ankapobeny. Ao amin'ny sokajy fampihenana ny fandaniana amin'ny fandaniam-bola, misy faritra maro izay mitana andraikitra lehibe amin'ny fitsinjovana raha toa ka safidy manintona ny fampiasana indray na tsia. Anisan'izany ny fampitahana fanoloana materialy (fampiasana tokana mifanohitra amin'ny fampiasana betsaka), tahiry asa, tahiry fitaterana, olan'ny fahasimban'ny vokatra, olana ara-piarovana ergonomika / mpiasa ary faritra fitehirizana lehibe sasany.
Amin'ny ankapobeny, anton-javatra maro no mamaritra raha toa mahasoa ny fanovana ny fonosana fitaterana indray mandeha na voafetra amin'ny orinasa iray ho lasa rafitra famonosana fitaterana azo ampiasaina, anisan'izany ny:
Rafitra fandefasana mivelatra mihidy na voafehy: Raha vantany vao halefa any amin'ny toerana farany alehany ny fonosana fitaterana azo ampiasaina ary esorina ny ao anatiny, ny singa fitaterana entana tsy misy entana dia angonina, alefa ary averina tsy misy fotoana sy fandaniana be. Ny lozisialy mifamadika — na ny dia miverina ho an'ireo singa fonosana tsy misy entana — dia tsy maintsy averina amin'ny rafitra fandefasana mivelatra mihidy na voafehy.
Ny fikorianan'ny vokatra tsy miovaova amin'ny habetsany: Ny rafitra fonosana fitaterana azo ampiasaina indray dia mora kokoa manamarina, mitazona ary mihazakazaka raha toa ka misy ny fikorianan'ny vokatra tsy miovaova amin'ny volabe. Raha vitsy ny vokatra alefa, ny tahiry mety hividianana ny fonosana fitaterana azo ampiasaina indray dia azo averina amin'ny fotoana sy ny fandaniana amin'ny fanarahana ireo singa fonosana poakaty sy ny lozisialy avadika. Ny fiova-bidy lehibe amin'ny fahita matetika amin'ny fandefasana na karazana vokatra alefa dia mety hanasarotra ny fandaminana marina ny isa, ny habe ary ny karazana fonosana fitaterana.
Vokatra lehibe na lehibe na ireo izay simba mora: Ireo dia kandidà tsara amin'ny fonosana fitaterana azo ampiasaina indray. Ny vokatra lehibe kokoa dia mitaky kaontenera indray mandeha na lafo be kokoa, lafo kokoa, noho izany, ny fahafaha-mitahiry vola maharitra amin'ny fanovana ny fonosana fitaterana azo ampiasaina indray dia tsara.
Ireo mpamatsy na mpanjifa mivondrona mifanakaiky: Ireo dia mety hahatonga ny mpilatsaka hofanina amin'ny vidin'ny fonosana azo ampiasaina. Ny fahafaha-manangana "ronono mihazakazaka" (làlambe kely sy kamiao isan'andro) ary ivon-toerana fanamafisana (fitoeran-tseranana ampidirina hanasokajiana, hanadiovana ary hametrahana ireo singa fonosana fitaterana azo ampiasaina indray) dia miteraka fotoana be fitehirizana.
Ny entana miditra dia azo alaina sy atambatra mba halefa amin'ny fotoana fohy kokoa.
Ho fanampin'izay, misy ny mpamily sasany manery ny tenany hanana ambaratonga avo kokoa amin'ny fananganana indray, toy ny:
· Fako maloto be
· Mihena matetika na simba ny vokatra
· Fonosana lafo lafo vidy na vidin'ny fonosana tokana ampiasaina indray mandeha
· Toerana fitaterana tsy dia ampiasaina amin'ny fitaterana
· Toerana fitehirizana / fitahirizana tsy mahomby
· Ny fiarovana ny mpiasa na ny olana ara-dalàna
· Filana lehibe amin'ny fahadiovana / fahadiovana
· Mila fitambarana
· Dia matetika
Amin'ny ankapobeny, ny orinasa iray dia tokony handinika ny famadihana ireo fonosana fitaterana azo ampiasaina indray raha toa ka lafo kokoa noho ny fonosana fitaterana indray mandeha na voafetra io, ary rehefa miezaka ny hahatratra ny tanjona maharitra maharitra napetraka ho an'ny fikambanan'izy ireo. Ireto dingana enina manaraka ireto dia hanampy ny orinasa hamaritra raha toa ka afaka manampy tombony amin'ny farany ambany ny fonosana fitaterana azo ampiasaina.
1. Fantaro ny vokatra mety ho azonao
Mamolavola lisitr'ireo vokatra matetika alefa amin'ny habetsany sy / na izay mifanaraka amin'ny karazany, habe, endrika ary lanjany.
2. Tombanana ny vidin'ny famonosana indray mandeha sy voafetra
Tombantombana ny vidiny ankehitriny amin'ny fampiasana paleta sy boaty fampiasana tokana ary voafetra. Ampidiro ny vidiny amin'ny fividianana, fitahirizana, fikirakirana ary fanariana fonosana ary ampidiro ny vidin'ny fetran'ny fiarovana ny ergonomika sy ny mpiasa.
3. Mamolavola tatitra ara-jeografika
Mamolavola tatitra ara-jeografika amin'ny famaritana ireo teboka fandefasana sy fandefasana. Tombano ny fampiasana ivon-toerana "mihazakazaka" sy foibe fanamafisana isan'andro (isan-kerinandro misy ny docka ampiasaina hanasokajiana, hanadio ary hametrahana ireo singa fonosana azo ampiasaina). Diniho ihany koa ny rojom-panomezana; Mety ho azo atao ny manamora ny fivezivezena amin'ny mpamatsy.
4. Avereno jerena ireo safidy sy sarany fandefasana azo ampiasaina azo ampiasaina
Avereno jerena ireo karazana rafitra fonosana fitaterana azo ampiasaina azo ampiasaina sy ny vidiny hamindrana azy ireo amin'ny alàlan'ny rojom-panomezana. Hadihadio ny vidiny sy ny androm-piainany (isan'ny tsingerina ampiasaina indray) amin'ireo singa fonosana fitaterana azo ampiasaina.
5. Tombano ny vidin'ny lozisialy avadika
Miorina amin'ny isa fandefasana sy fandefasana hita ao amin'ny tatitra ara-jeografika novolavolaina tamin'ny dingana 3, tombano ny vidin'ny logistika miverina amin'ny rafitra fandefasana loop-loop na fitantanana open loop.
Raha misafidy ny tsy hanokana ny loharanon-karena manokana hitantanana lojika lozisialy ny orinasa iray, dia afaka mahazo ny fanampian'ny orinasa mpitantana ny filankevitry ny antoko fahatelo hisahana ny rehetra na ny ampahany amin'ny fizotran'ny lozisialy.
6. Mamorona fampitahana mialoha ny vidiny
Miorina amin'ny fampahalalana nangonina tamin'ny dingana teo aloha, mamorona fampitahana mialoha ny vidiny eo amin'ny iray-na ny fampiasana voafetra ary ny fonosana fitaterana azo ampiasaina indray. Tafiditra ao anatin'izany ny fampitahana ny sarany ankehitriny izay hita ao amin'ny dingana 2 amin'ny isa manaraka:
- Ny sandan'ny vola sy karazana fonosana fitaterana azo ampiasaina azo adika ao amin'ny Dingana 4
- Ny sanda vidin'ny logistika miverina amin'ny dingana 5.
Ho fanampin'ireo tahiry azo isaina ireo, ny fonosana azo ampiasaina indray dia voaporofo fa mampihena ny vidiny amin'ny fomba hafa, ao anatin'izany ny fampihenana ny fahasimban'ny vokatra ateraky ny kaontenera diso, ny fihenan'ny vidin'ny asa sy ny ratra, ny fihenan'ny toerana takiana amin'ny tahiry, ary ny fampitomboana ny vokatra.
Na ara-toekarena na tontolo iainana ireo mpamily anao, dia azo inoana fa ny fampidirana fonosana azo ampiasaina ao amin'ny rojom-pivarotananao dia hisy fiatraikany tsara amin'ny faran'ny orinasa sy ny tontolo iainana.